Ndeapi ari Chrome DevTools e Chrome neChromium. | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | Free Software, Linux software
Neiyo Chrome DevTools isu tinobva tangoona mhedzisiro yekushandurwa mukodhi
Chrome DevTools ndeye seti yewebhusaiti yekugadzira uye ekugadzirisa maturusi akavakirwa muGoogle Chrome. Ehe, isu tinogona zvakare kuzvishandisa mune yayo yakavhurika sosi vhezheni; Chromium.
Izvo zvinokwanisika kuwana iyo Chrome maturusi evagadziri nekudzvanya iyo yakakosha mubatanidzwa Ctrl + Shift + I, zvakare nekusvetuka pamusoro pechinhu uye nekudzvanya-kurudyi pane Ongorora.
2 Gadzirisa izvo zvisingashande
3 Deredza kurodha nguva
4 Chinja kodhi
5 Edza akasiyana masikirini screen
7 Kuwana Chrome DevTools
Kana isu tavhura Chrome DevTools isu tinoona kuti u unoonekwan pani kurudyi rwe peji ratiri kubhurawuza. Kune chikamu chayo, iyi pani eIyo yakakamurwa kuita tabo dzinoenderana nechero chishandiso. Nekudaro, maturusi akapatsanurwa kuita zvikamu.
Izvo zvikamu ndezvi:
Elements: Inoratidza akasiyana zvikamu zveiyo peji.
Network: Inobatsira kuongorora uye kugadzirisa peji kuita.
Nguva: Inotendera kurekodha uye kuongorora kwezviitiko zvakasiyana zvinoitika panguva yekushanya kune saiti.
Kushanda: Inoongorora zvese zviwanikwa zvakatakurwa; pakati pevamwe, IndexedDB kana Webhu SQL dhatabhesi, yemuno uye yechikamu chengetedzo, makuki, app cache, mifananidzo, mafonti, uye masitayiti machira.
Chengetedzo: Inoona matambudziko ekuchengetedza mukodhi.
Ngatione zvatinogona kushandisa Chrome DevTools
Gadzirisa izvo zvisingashande
Izvo zvakaitika kune wese anovandudza. Nyora kodhi, tarisa kuti hapana zvikanganiso, uye zvakadaro panguva yechokwadi peji racho harishande sezvarinofanira. Chishandiso cheConsole inoratidza kukanganisa kupi kuri kuitika panguva yekuurayiwa.
Deredza kurodha nguva
Kana peji rikatora nguva yakareba kurodha, mushandisi anoneta oenda kune imwe saiti. Neraki, iyo nguva yeFlash mawebhusaiti uye avo ehupenyu animated apfuura. Zvisinei hazvo Networks tab yeiyo Chrome DevTools zvinoita kuti zvive nyore kuziva kuti ndezvipi zvinhu zviri kunonoka kutakura. Tinogona kudzokorora iyo bvunzo yeakasiyana ekumhanya mhanya.
Mune Elements tab isu tinogona ona zvinhu zvepeji, inoenderana html kodhi uye iyo css zvivakwa. Tinogona zvakare kuvashandura.
Tinogona kugadzirisa zvinyorwa zvepeji tichishandisa rairo
Edza akasiyana masikirini screen
Mahwendefa, mafoni, smart TV, desktop desktop. Chinyorwa chemidziyo yatino svetura nayo paInternet chiri kukura. Ne Chrome DevTools isu tinogona edza kana iro peji rinotaridzika zvakanaka pamhando dzakasiyana.
MuManagement izwi rekuti kuenzanisa rinoreva kudzidza kubva kune yakanakisa miitiro yeavo vanoita zvakafanana nesu. Ne Chrome DevTolls, kana tichida dhizaini yewebhusaiti isu tinogona tarisa iyo html kodhi uye css zvitaera uye wozviteedzera kune yedu saiti.
Kuwana Chrome DevTools
Chrome DevTools inowanikwa pane Google Chrome uye Chromium mabhurawuza. Chromium iri mune zvinyorwa zvekuparadzira kukuru. Inogona zvakare kuiswa kubva kuzvitoro zve Snap. Kana iri yeGoogle chrome iwe unogona svika pano. mune DEB uye RPM fomati
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Ndezvipi Chrome DevTools zve?
Google yakavhura sisitimu yekugadzira sandbox mamiriro eC / C ++